ယုံကြည်ခြင်းဆိုသည်မှာ ( Rev. Khin San Maw ) ~ The Light of Truth
ယုံကြည်ခြင်းဆိုသည်မှာ ( Rev. Khin San Maw )
Tuesday, August 24, 2010 The Light of Truth No comments
ယုံကြည်ခြင်းဆိုသည်မှာ ( About Faith )
ခရစ်ယာန်ဟူသောအသက်တာတွင် ယုံကြည်ခြင်းတည်းဟူသောဘာသာရပ်သည် အလွန်အရေးကြီးသည်။ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် အသက်ရှင်ရန်ကျမ်းစာက သွန်သင်သည်။ ထို့ကြောင့် ယုံကြည်သူများ ဟုလည်းခေါ်တွင် သည်။ "ယုံကြည်ခြင်းမရှိလျှင်ဘုရားသခင်၏စိတ်တော်နှင့်မတွေ့နိုင်။ " (ဟေဗြဲ ၁၁း၁၆) " ဖြောင့်မတ်သော သူသည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အသက်ရှင်ရမည်။" (ယာကုပ် ၂း၎၊ ရောမ ၃း၂၈၊ ဂလာ ၃း၁၁) ယနေ့ ခရစ် ယာန်လောကတွင် ယုံကြည်ခြင်းနှင့်မိမိဆန္ဒ၊ ယုံကြည်ခြင်းနှင့် မိမိဖြစ်ချင်သောအရာ၊ ယုံကြည်ခြင်းနှင့် မိမိရည်မှန်း ချက်တို့ကိုရောထွေးတတ်ကြသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ယုံကြည်ခြင်းကို အမှားအသုံးပြုခြင်းကြောင့် မိမိအတွက် ရောသူတစ်ပါးအတွက်ပါ ကောင်းကျိုးမတွေ့တတ်။ ဥပမာ-တစ်ခါကသင်းအုပ်ဆရာတစ်ဦးသည် ဘုရားကျောင်း ဗိမာန်တော် တည်ဆောက်ရေးအတွက် အသင်းတော်တွင် အလှူတော်ငွေကောက်ခံသည်။ မိမိတတ်နိုင်၍မဟုတ်၊ ဆုတောင်းခြင်းအားဖြင့် ငွေကြေးပမာဏတစ်ခုကို စာရွက်ပေါ်တွင်ရေးချကာ (၃)လ အတွင်း ပေးလှူပါမည်ဟု ကတိထားရသော ကတိတော်အလှူငွေဖြစ်သည်။ ထို(၃)လအတွင်း ယုံကြည်ခြင်း ဖြင့် ဘုရားသခင်ထံ ဆုတောင်း မျှော်လင့်ရန်ဖြစ်သည်။ လူတစ်ဦးသည် သူ၏စာရွက်ပေါ်တွင် သိန်း(၃၀၀)ဟုချရေး သည်။ သို့သော် (၃)လကြာ သော် ထိုသူမပေးနိုင်ပါ။ ရင်းနှီးသော မိတ်တွေတစ်ဦးက "ဘာကြောင့် မပေးနိုင်တာလဲ၊ ဆုမတောင်းဘူးလား "ဟုမေးသောအခါ ထိုသူက "ငါထီထိုးထားတယ်လေ၊ ဘုရားသခင်ဆီမှာထီပေါက် ဖို့ဆုတောင်းတာပဲ၊ ထီပေါက် ရင် သိန်း(၃၀၀)လှူမယ်လို့ ဘုရားကိုကတိပေးတယ်၊ ပေါက်မယ်လို့လည်း ငါ ယုံကြည်နေတာပဲ။ အခုမပေါက်တာတော့မတတ်နိုင်ဘူးလေ "ဟုပြန်ဖြေခဲ့သည်။ ထိုအရာသည် ယုံကြည် ခြင်းမဟုတ်ဘဲ မိမိဖြစ်ချင်သော ဆန္ဒသာ ဖြစ်သည်။ မိမိအထဲ၌ ယုံကြည်ခြင်းပမာဏ ရှိသလောက် အတိုင်း လုပ်ဆောင်ရမည်။ မဟုတ်ပါက ယုံကြည်ခြင်း သဘောင်္ပျက်ခြင်းနှင့် ရင်ဆိုင်ရမည်။
ယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်သောအရာများ (What Faith is not?)
၁။ ယုံကြည်ခြင်းသည် မျက်ကန်းတစ်ယောက်ကဲ့သို့ မဟုတ်ပါ။ (Faith is not blind)မျက်ကန်း တစ်ယောက်ကဲ့ သို့ဆိုသည်မှာ မိမိအတွက် ဘုရားသခင်လုပ်စေချင်သောအရာကိုမမြင်ဘဲ သူတစ်ပါးလုပ်ဆောင် သည်ကို အားကျပြီးလိုက်လုပ်တတ်ခြင်း၊ အောင်မြင်သောသူတစ်ယောက်ယောက်အား အတုယူခြင်း၊ အားကျပြီး ပုံတူကူးချခြင်းဖြစ်သည်။ (Blind = copy other people) ဘုရားသခင်သည် လူတိုင်းအတွက် မတူညီသော အကြံအစည်တော်များစွား ရှိပါသည်။ တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက်မတူပါ။ ကမ္ဘာပေါ်တွင်လူသန်းပေါင်း ၆၀၀၀ ကျော်ရှိသော်လည်း တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် လုံးဝထပ်တူညီ တူညီခြင်းမရှိသကဲ့သို့ပင် ဖြစ်သည်။
"(ဆာလံ၁၃၉း၁၇)ဟုဒါဝိဒ်မင်းကြီးကချီးမွမ်း သကဲ့သို့မိမိအသက်တာ အတွက် ဘုရားသခင် ထားရှိပေးသော အကြံအစည်တော်တို့ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ချီးမွမ်းစောင့်မျှော်ပါ။ သင်နှင့်တူသော သူ ဤကမ္ဘာတွင် အခြား သူမရှိပါ။
၂။ ယုံကြည်ခြင်းသည်ငြင်းပယ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ (Faith is not denial)
ယုံကြည်ခြင်းသည် ပြဿနာရှိပါလျက်နှင့်ပြဿနာမရှိပါဘူးဟု မသိချင်ဟန်ဆောင်ငြင်းပယ်နေခြင်းမျိူး မဟုတ်ပါ။ ပြဿနာ အခက်အခဲရှိကြောင်းသိပြီး ထိုပြဿနာကို ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် အောင်မြင်ကျော်လွှားနိုင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ငြင်းပယ် နေခြင်းမဟုတ်ပါ။ အာဗြဟံနှင့်စာရာသည် မိမိတို့ကလေးရရန် အရွယ်လွန်နေပြီဖြစ်ကြောင်း ကောင်းစွာ သိထားကြသည်။ မိမိတို့အိုနေပြီဖြစ်ကြောင်းကိုဟန်ဆောင်ပြီးမဖုံးကွယ်ပါ။ မျှော်လင့်စရာ အကြောင်းမရှိမှန်း သိကြသော်လည်း ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် မျှော်လင့်ကြသည်။ (ရောမ ၄း ၁၇-၂၂ ) ယုံကြည်ခြင်းသည် သင်၏ပြဿနာထက် ဘုရားသခင်ဘယ်သူလဲဆိုသည့်အရာပေါ် ပို၍အာရုံစိုက်သည်။
၃။ ယုံကြည်ခြင်းသည်လျစ်လျူရှုခြင်းမဟုတ်ပါ။ (Faith is not neglect)
လူတိုင်းသည် မိမိကိုယ် ပိုင်လုပ်ဆောင် ရမည့် တာဝန်များရှိသည်။ (၁တိ ၅း၈)
Everybody have responsibility for their own တစ်ခါတရံ ဘုရား သခင်အတွက်လုပ်ဆောင်သည်။ အမှုတော်ဆောင်နေသည်ဟုဆိုကာ မိသားစု ကိုမပြုစု၊ "ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် နေရစ်ကြ "ဟုဆိုကာ
နှစ်ရှည်လများ ဧ၀ံဂေလိ၊ သာသနာပြုခရီးစဉ်ပြုတတ်ကြသည်။
မိမိဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် တည်ထောင်ထားသော အိမ်ထောင်အတွက် ဘုရားသခင်ထောက်ပံ့ပေးသည်မှာ မှန်သော် လည်း ဘုရားသခင်ကြည့်လိမ့်မည်ဟု လျစ်လျူရှုထားရန် မဟုတ်ပါ။ ထိုအရာသည်လည်း ယုံကြည်ခြင်း မမည်ပါ။
ထိုနည်းတူစွာ ဤလောကတွင် ဘုရားသခင်အပ်နှင်းထားသော မိမိကိုယ်ခန္ဓာကိုစောင့်ရှောက်ရန် မိမိတာဝန် ဖြစ်သည်။ (၁ကော ၃း ၁၆-၁၇)မိမိကိုယ်ခန္ဓာထဲသို့ မကောင်းသောအရာများ ပျက်စီးစေသောအရာများ၊ ရောဂါများဝင်ရောက်ခြင်းကို အားမပေးရန် ကာကွယ်တားဆီးဖို့တာဝန်ရှိသည်။ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် " ဘုရားသခင် တာဝန်ယူမည်၊ ကွယ်ကာမည်၊ ကျန်းမာစေမည် " ဟုဆိုကာ နေချင်တိုင်းနေ၊ လုပ်ချင်တိုင်းလုပ် စားချင်တိုင်း
စားနေခြင်းသည် ယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်။ ဥပမာ-ဦးဘသည်သွေးတိုးရောဂါရှိသည်။ သို့သော်သူသည် ၀က်ဆီ အလွန်ကြိုက်သည်။ ထိုအခါသူက " ဤအစားအစာများကို ယေရှုနာမနှင့်ကောင်းချီးပေးပါ၏။ ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်း ကျန်းမာခြင်းဖြစ်စေပါ။ အနှောင့်အယှက် မကောင်းမသင့်သော အရာများကို ယေရှုနာမဖြင့် ဖယ်ရှားလျက် ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် သုံးဆောင်ပါ၏ "ဟုဆုတောင်းကာ ၀က်ဆီများကိုအတုံးလိုက်အတစ်လိုက်စားခြင်းသည် ယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ လျစ်လျူရှုခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။ တစ်ခါက ဆေးလိပ်သောက်တတ်သော လူငယ်တစ်ဦး အား ဆေးလိပ်မသောက်ဘို့ရန်နှင့် ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းသည် မိမိအဆုတ်ကို ဆိုးရွားစွာထိခိုက်ပျက်စီး စေနိုင်ကြောင်းပြောပြသောအခါ ထိုလူငယ်က"မစိုးရိမ်ပါနဲ့ ကျနော့်အဆုတ်ကို ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ အသွေး တော်နဲ့ ကွယ်ကာပြီးသားပါ။ ဘုရားသခင်စောင့်ရှောက်လိမ့်မည်လို့လည်း ယုံကြည်တယ် " ဟုပြန်ဖြေဖူးသည်။
ထိုအရာသည်ယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ မိမိကိုယ်ခန္ဓာအပေါ်မိမိတာဝန်ရှိခြင်းကိုလျစ်လျူရှုခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်အား လွှဲချခြင်းဖြစ်သည်။တစ်စုံတခု ရောဂါဝင်ရောက်လာပါကထိုလူငယ်သည်ဘုရားသခင်အား အပြစ်တင်ပေလိမ့်မည်။
၄။ ယုံကြည်ခြင်းသည်မိုက်မဲခြင်းမဟုတ်ပါ။ (Faith is not foolish)
မိုက်မဲခြင်း ကျမ်းပိုက် တစ်ခုခုကိုစွဲကိုင်ပြီး လွဲမှားစွာ ကောက်ယူကာ တစ်စုံတစ်ခုလုပ်ပြလိုခြင်းဖြစ်သည်။" ယုံကြည်သောသူတို့၌ ဖြစ်အံ့သောနမိတ်လက္ခဏာများဟူမူကား မြွေတို့ကို ဖမ်းကိုင်ကြလတ္တံ "ဟု ဆိုသော ကြောင့် ပြစားလိုသောသဘောနှင့် မြွေတွေ့တိုင်းဖမ်းနေရန်မဟုတ်ပါ။ (မာကု ၁၆း၁၈) " သေစေတတ်သော အဆိပ်အတောက်ကိုသောက်စားလျှင် ဘေးဥပဒ်နှင့် ကင်းလွတ်လတ္တံ "ဟုကျမ်းစာဆိုသောကြောင့် အဆိပ် သောက်ပြန်ရန်မဟုတ်။ "ကျမ်းစာထဲတွင် ပေတရု ရေပေါ်လမ်းလျှောက်သည် "ဟုဆိုကာ ရေပေါ်တွင် လမ်းလျှောက်ပြရန် မကြိုးစားပါနှင့်။ ထိုအရာသည်မိုက်မဲခြင်းသာဖြစ်သည်။ ယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ မလွဲမ ရှောင်သာထိုအရာများကို လုပ်ဆောင်ဘို့ရန် လိုအပ်သောအချိန်ရှိလာပါကလည်း ဘုရားသခင်သည် နိမိတ် လက္ခဏာပြုပါလိမ့်မည်။ သို့သော် ပြစားဘို့ရန် (သို့) ၀ါကြွားဖို့ရန် လုပ်ဆောင်ရမည် မဟုတ်။
၅။ ယုံကြည်ခြင်သည်ခံစားချက်မဟုတ်ပါ။ (Faith is not feeling)
ဥပမာ-လူငယ်တစ်ဦးသည် ချောမောလှပသော မိန်းမငယ်တစ်ဦးကို တွေ့ပြီးနောက် ထိုမိန်းမငယ်ကို စွဲလန်းတမ်းတသော ခံစားချက်ဖြင့် "ယေရှုနာမနဲ့ ငါ့အတွက်ဖြစ်တယ်၊ အခြားသူနဲ့မကြိုက်သွားဘို့ အသွေး တော်နဲ့သူ့ကို ကာကွယ်ပါတယ်၊ ယေရှုနာမ နဲ့သိမ်းပိုက်ပါတယ် "ဟုဆုတောင်းကာ သူ့အတွက်ပဲ ဖြစ်လာ ရမည်ဟု ယုံကြည်နေပါသော်လည်း အချိန်တန် သောအခါ ထိုမိန်းမငယ်သည် အခြားသူတစ်ယောက်နှင့် စုံဖက်သွားပါလျှင် အဘယ်သို့ဖြစ်မည်နည်း။ ထိုလူငယ်သည် စိတ်ပျက်ခြင်းကြီးစွာနှင့် ဘုရားသခင် ကို အပြစ်တင်လိမ့်မည်။ ယုံကြည်ခြင်းသင်္ဘောပျက်လေပြီ။ ကျွန်ုပ်တို့ တွင်ခံစားမှုရှိကြသော်လည်း ခံစားမှုဖြင့် အသက်မရှင်ရပါ။ ယုံကြည်ခြင်းရှိလျှင် ခံစားချက်များကို အောင်မြင်နိုင် သည်။ ၀မ်းနည်းနိုင်သည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်၏ ၀မ်းမြောက်ခြင်းဖြင့် အသက်ရှင်ရန် ရွေးယူနိုင်သည်။
ယုံကြည်ခြင်းဆိုသည်မှာ ယုံကြည်ခြင်းသည် ဘုရားသခင်ပြောသောစကား၊ ဘုရားသခင်ပေးသော အတည်ပြုချက် ပေါ်တွင်သာ အခြေခံရသည်။ ယုံကြည်ခြင်းသည် နှုတ်ကပတ်တော်တွင် အခြေခံသည်။ (Faith always base on the Word of God ) ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် အသက်ရှင်ခြင်းဆိုသည်မှာ နှုတ်ကပတ်တော် အတိုင်း (သို့)ဘုရားပြောသည့်အတိုင်းအသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်သည်။ (ူငလငညါ ဘပ်ငေအ့ာနညျေူငလငညါ ဘပ အ့နျွှသမိ သ်ွသိ) ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် လျှောက်လှမ်းအသက်ရှင်ခြင်းဆိုသည်မှာ နှုတ်ကပတ်တော် အတိုင်း (သို့) ဘုရားသခင်ပြောသည့်အတိုင်း လျှောက်လှမ်းပေးခြင်းဖြစ်သည်။ (Living by faith means living by the Word of God) ယုံကြည်ခြင်းသည် နှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်တွင် အမြဲတမ်းအခြေခံသည်။
ပေတရုက ရေပေါ်တွင် လမ်းလျှောက်ခဲ့သည်။ ပေတရုက ရေပေါ်တွင်လမ်းလျှောက်ခဲ့သည်။ သို့သော် သူ့ဆုံး ဖြတ်ချက်နှင့်သူလျှောက်သည်မဟုတ်။ ခရစ်တော်ထံမှ "လာခဲ့လော့"ဟူသောမိန့်တော်မူသံကို သူကြား သည်။ (မဿဲ ၁၄း၂၉) ကြားသည့်အတိုင်း ပေတရု နာခံသည်။ ရေပေါ်တွင်လမ်းလျှောက်ခဲ့ဘူးသည်။ ထိုနည်း တူစွာ မိမိ၏အိမ်ထောက်ဘက်အတွက်လည်း ဘုရားသခင်ထံမှ အတည်ပြုချက် သင်ရရှိဘို့လိုသည်။ တစ်နည်း အားဖြင့် ထိုသူနှင့်တစ်သက်လုံးလက်တွဲရန် သင့်နှလုံးသားထဲ၌ ငြိမ်သက်ခြင်းအုပ်စိုးနေဘို့လိုသည်။ " သူ့ထက်သာ တာရှိလာလျှင်"ဟုသင်စဉ်းစားမိလျှင် သင်စိတ်မနိုင်သေးပါ။ ဘုရားသခင်ပေးသော သူဖြစ်လျှင် သင်သည် သူ့အားတစ်သက်လုံးလက်တွဲသွားရန် ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်စိတ်ဆုံးဖြတ်နိုင်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်ထံမှာ စကားတော်(သို့)အတည်ပြုချက်ရမှသာလျှင် "သူဟာငါ့အတွက်"ဟူသော ယုံကြည်ခြင်း ထားပါ။ ပြည့်စုံလာမည်။
ကျမ စကာင်္ပူတွင် ကျမ်းစာကျောင်းတက်စဉ်အခါ သွားလိုသောကျောင်းသားကျောင်းသားများအတွက် အမေရိကတွင် Winter Bible Seminaryသင်တန်းတစ်ခုတက်ရောက်ရန် ကျောင်းမှစီစဉ်ခဲ့ ပါသည်။ ကျမ အတွက်ကြီးမားလှသော ခရီးစရိတ် နှင့်တည်းခိုခများအပါအ၀င်အခက်ခဲဆုံးမှာ ကျောင်း သားဗီဇာ(၆)လ သက်တမ်းသာရှိသော မြန်မာနိုင်ငံ သူတစ်ယောက်အတွက် အမေရိကန်ဗီဇာ ရဖို့ရန်လုံး ၀မသေချာပါ။ သွားချင်လှပါသော်လည်းယုံကြည် ခြင်းဖြင့်သွားကိုသွားရမည်ဟုလူရှေ့တွင်ကျမမပြောရဲပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆို သော်ဘုရားသခင်ထံမှ အတည် ပြုချက်ကိုကျမမရသေးပါ။ ကျမနှင့်ရင်းနှီးသော သင်းအုပ်ဆရာကြီးတစ်ပါး နှင့်တွေ့သောအခါကျမ ဤကိစ္စအတွက်ဆုတောင်းပေးရန်သူ့အားပြောပြမိပါသည်။ သို့သော်ထိုဆရာကြီး က"ဘုရားသခင်သွားခိုင်းမှာမဟုတ်ဘူး၊ သွားရင်လည်းမင်းပြန်လာမှာမဟုတ်ဘူး၊ ငါလည်းမယုံပါဘူး "ဟုသာ ပြောခဲ့သည်။ ထိုစကား ကြောင့်ကျမအလွန်ဝမ်းနည်းစွာဘုရားသခင်အား ဆုတောင်းခဲ့ပါသည်။ "ကိုယ်တော် ကျမကိုယုံ လျှင်လွှတ်ပါ၊ မယုံလျှင်လမ်းပိတ်ပေးပါ"ဟု မျက်ရည်ကျလျက်ဆုတောင်းသောအခါ ဘုရား သခင်က"ငါ့သမီး မင်းကိုငါယုံကြည်တယ်"ဟုပြန် လည်စကားပြောခဲ့ပါသည်။ ထိုစကားတော်သည် ကျမဗီဇာ ရမည်ဟုဘုရားသခင် ထံမှအတည်ပြုချက် ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ကျမ ကိုယုံကြည် စိတ်ချမှုကြောင့် အဆမတန်ဝမ်းမြောက် ရသည်။ ထို့နောက်အမေရိကန်သံရုံးမ၀င်မီပင် ကျမဗီဇာရပြီး ဖြစ်ကြောင်း အမေရိကန် နိုင်ငံကို သင်တန်းသွား တက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ကျမယုံကြည်နေသည်။ ယုံကြည်သည့်အတိုင်းပင် ကျမ သူငယ်ချင်းများအား ပြောပြသည်။ တချို့က "ဗီဇာမရသေးပဲ လျှောက်မ ပြောနဲ့၊ မရရင်အရှက် ကွဲဦးမယ်" ဟုပြောကြသော် လည်းဘုရားသခင်၏ အသံတော်ကို ပေတရုကဲ့သို့ ကျမရထားပြီးဖြစ်သောကြောင့် သံသယ မရှိပါ။ အချိန်တန်သောအခါဘုရားသခင်သည် ဗီဇာရရှိစေ ပြီးလိုအပ်သောခရီးစရိတ်၊ တည်းခိုရန် နေရာများ ကိုပြင်ဆင်ပေးပြီး ထိုခရီးစဉ်အထမြောက်စေခဲ့ ပါသည်။ ထို့ကြောင့်မှန်ကန်သော ယုံကြည်ခြင်းဆိုသည်မှာ ဘုရားသခင်ပြောသောစကား(သို့)ဘုရားသခင်ထံမှအတည်ပြုချက်ပေါ်တွင်သာ အခြေခံပါသည်။ မှားယွင်း သော ယုံကြည်ခြင်းထားရှိခြင်းသည် မိမိကိုယ်ကိုဝမ်းနည်းစိတ်ပျက်စေရုံမျှမက ဘုရားသခင်ကိုသာ အပြစ် တင်မိပေလိမ့်မည်။ အများရှေ့တွင်လည်းသက်သေခံချက်မကောင်း နိုင်ပါ။
သို့သော်မှန်ကန်သော ယုံကြည်ခြင်းရှိခြင်း သည်မိမိအသက်တာတွင်ဝမ်းမြောက်စရာ အကြောင်း စုံလင်စေ ရုံမျှမက သူတစ်ပါးရှေ့တွင်လည်းဘုန်းတော် ထင်ရှားစေပါသည်။
Credit to>> Exit Youth Journal